Bokin' i Nehemia - Wikipedia
Bokin' i Nehemia
(tonga teto avy amin'ny Bokin'i Nehemia)
Ny mandan'i Jerosalema, sary avy amin'ny PikiWiki Israel, taona 2011.
Ny Bokin' i Nehemia dia boky ao amin' ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Mitantara ny fikasan’i Nehemia hanangana ny manda efa nirodana indray ny boky. Araka ny voasoratra ao dia nanendry an’i Nehemia ho governoran’i Joda i Artakserksesy, mpanjakan'i Persia, mba hahatanterahany ny faniriany nefa nisy ny tsy nankasitraka izany, dia Jiosy (na Jody) sasany sy ireo governoran’ny tanàna nifanakaiky taminy. Vita ihany ny manda. Nanao fanarenana ara-tsosialy sy ara-pivavahana i Nehemia. Tanatin’ny roa ambin’ny folo taona no nanatanterahany izany rehetra izany. Rehefa niverina tao Jerosalema indray izy dia nahita fa nikorosy fahana ny fiainan’ny Jiosy tamin’ny fanambadiana vehivavy hafa firenena, ka nitoetra tao Jerosalema i Nehemia mba hampihatra indray ny Lalàn’i Mosesy.
2 Ny mpanoratra
3 Ny fizaràn’ny boky
3.1 Fananganana ny manda sy fanarenana sosialy (1 – 7)
3.2 Fanavaozana ara-pivavahana (8 – 10).
3.3 Fanadiovana ny tanàna (11 – 13)
Tamin’ny voalohany ny Bokin’i Nehemia dia tsy niavaka tamin’ny Bokin’i Ezra (na Esdrasa) izay samy nitambatra tamin’ny Bokin’ny Tantara. Sahala amin’ny Boky voalohany sy faharoan’ny Tantara, ny Bokin’i Nehemia sy ny Bokin’i Ezra, izay nitambatra ho boky tokana (Ezra-Nehemia) dia tsy nosarahana raha tsy efa taty aoriana: tsy fantatra ny fotoana sy ny antony nanaovana an’izany. Ny Volgata, dikan-teny latinan’ny Baiboly, no nandraikitra an’izany fanasarahana izany, izay nanjary fanaon’ny mpanonta ny Baiboly taty aoariana. Ny Bokin'i Nehemia dia atao hoe 2 Esdras (na Esdras II) ao amin'ny Volgata fa mitambatra amin'ny Bokin'i Ezra kosa izy ao amin'ny Baiboly ortodoksa etiopiana ka manome boky tokana atao hoe 1 Izra izay tsy iza fa ny Ezra-Nehemia ihany.
Inty ny fafana maneho ny fiovaovan'ny anaran'ny boky:
Ny iantsoana azy ato amin’ny Wikipedia malagasy Anarana omen’ny mpikaroka Volgata Slavônika Etiôpiana Anglisy
Bokin’i Esdrasa - 1Esdrasa 1Esdras 1Ezdra 1Izra Ezra
Bokin’i Nehemia - 2Esdrasa 2Esdras Nehemia Nehemiah
Esdrasa grika 3Esdrasa 3Esdrasa 3Esdras 2Ezdra 2Izra 1Esdras
4Esdrasa 5Esdrasa 5Esdrasa 4Esdras
3Ezdra - 2Esdras
Apokalipsan’i Esdrasa 4Esdrasa Izra Sutuel
6Esdrasa 6Esdrasa -
Ny lovantsofina dia milaza fa i Nehemia no nanoratra ny boky. Ho an’ireo mpikaroka momba ny Baiboly kosa, ny Bokin’i Nehemia dia nosoratan’ilay nanoratra ny Bokin’ny Tantara, atao hoe "ilay Mpitantara", izay mpisorona na Levita niaina tamin’ny taonjato faha-4 tal. J.K. izay nanovo tao amin’ny Raki-pitadidian’i Nehemia nosoratan'i Nehemia hoan’ny mpanjakan’i Persia sy ho an’ny firaketana tao Jerosalema. Fa ny toko faha-8 sy faha-9 kosa dia nalainy avy ao amin’ny Raki-pitadidian’i Ezra.
Ny fizaràn’ny boky[hanova | hanova ny fango]
Azo zaraina telo ny Bokin' i Nehemia:
- Fananganana ny manda sy fanarenana sosialy (1 – 7);
- Fanavaozana ara-pivavahana (8 – 10);
- Fanadiovana ny tanàna (11 – 13).
Fananganana ny manda sy fanarenana sosialy (1 – 7)[hanova | hanova ny fango]
Nifankahita tamin’i Nehemia indray i Hanany, izay mety ho rahalahiny, izay nitantara taminy ny zava-misy ao Jerosalema taorian’ny Fahababoana. Nampalahelo an’i Nehemia ny zavatra henony ka nangataka alalana tamin’ny mpanjaka Aratakserksesy mba ho any Jerosalema izy hanangana ny mandan’i Jerosalema izay voarodana. Voatendry ho governoran’i Joda i Nehemia ka nandresy lahatra ny vahoaka tao Jerosalema hanangana ny manda. Nisy ny fanoherana nataon’ireo governora manodidina sy ny fiampangana tsy marina an’i Nehemia ho manomana fikomiana amin’ny mpanjaka. Nanendry mpiambina ny manda sy ny vavahady i Nehemia. Vita tanatin’ny 52 andro ny manda.
Mba hiadiana amin’ny fanararaotan'ireo Jiosy nanan-karena avy any Babilona ny mahatra, dia nanao fanavaozana ara-tsosialy i Nehemia, ka noraràna ny fampitrosana misy zanabola be loatra sady nofoanana ny trosan’ireo mahantra ary naverina amin’ny tompony ny fananana natao antoka.
Fanavaozana ara-pivavahana (8 – 10).[hanova | hanova ny fango]
Nofaritan’i Nehemia niaraka amin’i Ezra (na Esdrasa) ny fomba tokony ho famakiana ny bokin’ny lalàn’i Mosesy. Natomboka ny fankalazana ny Fetin’ny Tabernakely (na Sokota; hebreo: חַג הַסֻּכּוֹת I Hag haSoukkot). Nisy ny fotoam-pifonan’ny vahoaka jiosy tamin’Andriamanitra noho ny fahotan’izy ireo. Nataon’i Nehemia ny hahatonga an’i Jerosalema honenan'ny Jiosy maro. Nisy koa ny fepetra noraisiny mba hikarakarana ny Tempoly sy ny Levita miasa ao.
Fanadiovana ny tanàna (11 – 13)[hanova | hanova ny fango]
Nanao fanadiovana ny tanàna sy nanohy ny fanavaozana ara-pivavahana koa i Nehemia: fandroahana ireo tsy Jiosy avy ao amin’ny fiangonan’Andriamanitra, fandraràna ny fanaovan-draharaha amin’ny andro sabata, fandraràna ny fanambadiana olana hafa firenena.
Niverina any Sosa i Nehemia ka nahazo alalana indray hiverina any Jerosalema. Nitsidika an’i Jerosalema fanindroany i Nehemia 12 taona taty aoriana ka hitany fa niverina amin’ny fanaony taloha indray ny Jiosy tao Jerosalema.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Nehemia&oldid=1014462"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 09:56 ity pejy ity.